Eyona midlalo mihlanu mihle yesiphekepheke ye-Android | I-Androidsis
Iimidlalo ezi-5 eziphambili ze-spaceship ze-Android
UAron Rivas | 31/05/2021 10:00 | Izixhobo ze-Android, Imidlalo ye-Android
Omnye wemixholo yomdlalo onomdla kakhulu kwiVenkile yokuDlala kuGoogle yee-mobiles ze-Android zezi zeziphekepheke, kwaye siyazi kakuhle loo nto. Kukhulu kangangokuba uninzi lweyona midlalo ithandwayo evenkileni ikolu luhlu, yiyo loo nto eli xesha sidwelisa eyona ilolu hlobo.
Kule posi yokuhlanganisa sidwelisa wena Eyona midlalo mihlanu mihle yesiphekepheke ye-Android Ukuzikhetha, kuye kwafuneka sijonge ukulinganiswa komsebenzisi kwivenkile, kunye nokuthandwa kwabo kunye nezinye izinto ezibalulekileyo kubandakanya imifanekiso, umdlalo weqonga, kunye nengoma yesandi. Ke ngeli xesha unokufumana ezona zihloko zibalaseleyo kolo didi.
Apha ngezantsi uyakufumana uthotho dEyona midlalo mihle yesiphekepheke kwii-smartphones ze-Android. Kubalulekile ukuba uqaphele, njengoko sihlala sisenza, ukuba wonke umntu oza kumfumana kule post yokudibanisa Zisimahla. Ke ngoko, awuzukunyanzela ukuba wenze nayiphi na imali ukuze ufumane enye okanye zonke. Nangona kunjalo, enye okanye ezingaphezulu zinokuba nenkqubo yentlawulo encinci encinci, enokuvumela ukufikelela kumxholo ongaphezulu ngaphakathi kubo, kunye nokufumana izinto, amabhaso kunye nemivuzo. Ngokufanayo, akuyomfuneko ukwenza nayiphi na intlawulo, kufanelekile ukuphinda. Ngoku ewe, masifike kuyo.
1 Ukuhlaselwa kweGlasi: Umdubuli ophilayo
2 Indawo yasemajukujukwini: Imidlalo yasemajukujukwini-1v1 Yakha kwaye ulwe
3 Ixesha leNkwenkwezi yokuHamba
4 Inkwenkwezi yeHadesi
5 Umdubuli wasithuba: Iimfazwe zeGalaxy - Imfazwe engaziwayo
Ukuhlaselwa kweGlasi: Umdubuli ophilayo
Masiqale ngendlela enkulu, ngomdlalo onwabela ukuthandwa okumangalisayo kwiVenkile yokuDlala kwaye yenye yezona zidlalwe kakhulu kwivenkile yonke. Ngombuzo, sithetha ngeGlass Attack: Alien Shooter, isihloko esisisa kwelo xesha le-epic kunye neentsomi apho ii-desktop consoles zazizinto zolo suku, nangona zihlaziywa ngakumbi kunye nemizobo ephucukileyo kunye noopopayi, kunjalo.
Ukuhlaselwa kweGalaxy: I-Alien Shooter ngumdlalo apho Kuya kufuneka ukhusele uMhlaba ngazo zonke iindleko kuhlaselo lwangaphandle, eyenziwa ngekhulu leenqanawa zotshaba eziya kwiplanethi emva koko zigqibe kwaye zingene kuyo. Nangona kunjalo, injongo inkulu kunokuba ibonakala; Indalo iphela isemngciphekweni, njengokuba abaphambukeli ababi befuna ukoyisa indalo, kwaye uxanduva lwakho kukoyisa kusetyenziswa iziphekepheke kunye nezixhobo ezininzi eziza kukunceda woyise kumlo oyindumasi onamanqanaba amaninzi obunzima ukwandisa ukwanda kobunzima bayo.
Njengoko uqhubeka ngomdlalo kwaye woyisa iinqanawa zotshaba, unokuhlaziya kwaye uhlaziye eyakho. Oku kuyimfuneko ukujongana namanqanaba alandelayo, kuba njengawe, abaphambukeli baphucula izixhobo kunye nezixhobo. Khumbula, baya kuzama ngandlela zonke ukuhlasela iplanethi kunye nendalo iphela.
Izinto eziguqukayo zalo mdlalo zilula kakhulu. Chukumisa iscreen sokuhambisa nokubulala abaphambukeli ngesiphekepheke sakho. Qokelela zonke izinto kwaye uphucule nganye nganye. Kananjalo, kukho imowudi yabadlali abaninzi kunye namanqanaba ali-120, ngalinye linzima ngakumbi kunelinye. Kuya kufuneka ujongane nabaphathi abagqithisileyo, ekungekho lula ukohlula, kodwa ngokusetyenziswa kwezixhobo zakho kunye neelaser ungenza umlo olungileyo.
Kufanelekile ukuba ukhankanye loo nto Le yeyona midlalo idlalwayo yesiphekepheke ye-Android kudidi lwayo, ingatsho ukuba nguye onandipha iwonga lokuba ngukumkani ngale ndlela. Kuphela kwiVenkile yokudlala inokukhutshelwa okungaphezulu kwesigidi se-100, sisondela kwaye sisondela kwizigidi ezingama-500. Ikwaqhayisa ngexabiso elihloniphekileyo leenkwenkwezi ezi-4.5 kwivenkile kunye neepesenti ezi-2 zokulinganisa kunye nokulinganisa. Thatha incasa kwaye woyise iinqanawa ezihlaselayo!
Umthuthukisi: I-OneSoft Global PTE. LTD.
Indawo yasemajukujukwini: Imidlalo yasemajukujukwini-1v1 Yakha kwaye ulwe
Indibaniselwano yelizwe elizayo apho itekhnoloji iqhubele phambili ngokumangalisayo kwaye umdlalo wesiphekepheke yenye yezona zinto zibalaseleyo, kwaye yile nto kanye esiyifumana ngeSpace Arena: Imidlalo yeSpacehip - 1v1 Yakha kwaye ulwe.
Ngunyaka wama-4012 kwaye uzifumanisa ukhona umqhubi onqwenela ukuba ngumlo kunye nenqwelomoya yenqwelomoya, Unqwenela ukoyisa indawo kwaye ubonise wonke umntu kunye nehlabathi ukuba wenza ntoni ngomthi. Ngalo mdlalo ungabeka izakhono zakho kwindawo yoomatshini bokubhabha kwaye uxhobise uyilo lwakho kunye neenqanawa ngezixhobo ezinamandla ezibandakanya iinkanunu, ii-lasers kunye nokunye. Kukho umhlaba wetekhnoloji eyonakalisayo onokuphanda ngayo ukuze uyisebenzise kwiinqanawa zakho. Baxhobise ngeyona nto ibalaseleyo kwaye ubonise ukuba ngubani umphathi kwindalo iphela.
Apho kwisithuba esingaphandle ungajongana nabanye abadlali, kwaye ngale ndlela ungqine ukuba ungoyena makhi ubalaseleyo wesiphekepheke wabo bonke.
I-Arena yendawo: IGalactic Armada
Umthuthukisi: I-HeroCraft Ltd.
Ixesha leNkwenkwezi yokuHamba
Ukuba ungumlandeli we Star Trek kunye nembali yayo, lo mdlalo wesiphekepheke ulungele wena, kuba uya kuwuthanda ngokuqinisekileyo. Ibandakanya uninzi lweemodeli zeziphekepheke zexesha elizayo kunye nabalinganiswa abavela kwiStar Trek entsha: Uthotho lokufumanisa.
Ku malunga Isicwangciso-qhinga seStar Trek RPG, apho kuya kufuneka udlale indima yeKapteni ngokuyalela inkwenkwezi yakho yokuqala kwaye uqokelele iqela, apho uya kuba nakho ukubandakanya abalinganiswa bakudala beStar Trek kwilizwe elizayo nakwintsomi ephezulu kunye nendalo yonke. Uya kuzifumana kulwandle olungenanto, oluyiNdalo iphela, kwaye kuya kufuneka wakhe kwaye uphucule iziphekepheke, ukuze ube nenqwelomoya enamandla, emva koko uphonononge ezona ndawo zingalunganga kunye nobuso kumadabi asentsomini apho Kuya kufuneka ubonakalise ukuba ungoyena mdlali ubalaseleyo kulo mdlalo we RPG.
Unokuhamba ngendlela I-icon ye-USS Enterprise, i-Voyager kunye ne-Shenzhou spacecraft, i-Klingon Bird-of-Prey kunye ne-Sarcophagus spacecraftcraft, okanye iBorg Cube edumileyo., leyo yayisetyenziswa yiBorg Collective. Ukongeza kwezi, unokufumana ezinye ezininzi, ukuze ukhangele indawo ebandayo nengummangaliso yangaphandle. Unokudlala nabahlobo bakho kwaye nikhuphisane kwimishini yolonwabo kunye nemisitho rhoqo ngeempelaveki. Kwelinye icala, kukho inqanaba lokuphakama nenqanaba apho unokunyuka khona uye kwinombolo ukubonisa ukuba ngubani oyena ubalaseleyo kwindalo iphela kwi-Star Trek Timeline, omnye umdlalo obalaseleyo kolu didi.
Indalo iphela ayinakulinganiswa kwaye inabile, kwaye kufuneka uyoyise kwiHadesi 'yeNkwenkwezi, umdlalo weqhinga lesithuba apho uya kufumana iinqanawa ezininzi kunye namawakawaka abadlali oza kujongana nawo kwaye ube ngoyena mntu ubalaseleyo.
Kuya kufuneka uphonononge inkqubo enkulu yelanga kwaye ulwe nemikhosi kunye nendawo yemikhosi yaseCerberus, ngaxeshanye ukuba ulungelelanise iiplanethi ezininzi kwaye ukhokele kwaye uphucule ubomi kuzo, uzenze zifumane imisebenzi kuzo. Unako kwaye kufanelekile ukuseka izivumelwano kunye nobudlelwane bezopolitiko nabanye abadlali, kodwa hayi ngaphandle kokucacisa yonke imikhosi yakho yezomkhosi, yokutsala kunye neyentengiso, ukwenza ukuba iikholoni ziphumelele. Yintoni egqithisile, awunokwazi ukuhamba kwisithuba esingaphandle kuphela, kodwa kunye nokwakha izithuba zasemkhathini kwaye wenze ngokwezifiso izixhobo kunye neemodyuli ezenza ukuba zoyike kwaye ziyinyani.
Lo mdlalo udlalwa ngonxibelelwano lwe-Intanethi, kodwa xa ungaxhunyiwe, akukho mntu uya kuthatha impumelelo yakho kunye nenkqubela phambili, ukuze uyidlale ngesantya sakho nanini na ufuna, ngaphandle koxinzelelo. Ukuba ufuna ukuqhubela phambili ngendlela engcono, ungadibana nabanye abadlali okanye nisebenze kunye xa kufanelekile.
IHayidesi 'yiNkwenkwezi ngumdlalo owonwabela udumo oluhle kwiVenkile yokuDlala yokuba yiyo enye yezona zinto zikhutshiwe kakhulu kwaye idlalwe kudidi lwayo, kunye nenqanaba elifanelekileyo leenkwenkwezi ze-4.3 esekwe ngaphezulu kwama-40 amawaka amagqabantshintshi nangaphezulu kokukhutshelwa kwesigidi esinye.
Umthuthukisi: Indawo yeParal Inc
Umdubuli wasithuba: Iimfazwe zeGalaxy - Imfazwe engaziwayo
Ukugqibezela ukudityaniswa kweyona midlalo mihlanu ilungileyo yesiphekepheke yee-smartphones ze-Android kunye neetafile, Umdubuli wasithuba: I-Galaxy Wars-Imfazwe yama-Alien ngumgqatswa esimkhethile. Kwaye lo mdlalo yenye yezona zilungileyo zohlobo lwazo, kunye neyona nto ikhutshelweyo kwiVenkile yokuDlala, nokuba sisihloko esonwabisa apho kufuneka ulawule isiphekepheke sakho kwaye ujolise kuzo zonke iinqanawa zangaphandle ezizama Ukuhlasela umnyele uphela, ekufanele ukuba uziphephe ngazo zonke iindleko.
Inomxholo ofanayo nomdlalo wokuqala ochazwe kweli nqaku. Nantsi unayo iziphekepheke ezininzi ekufuneka uzilinge ukoyisa abahlaseli, Ngezixhobo ezininzi, amandla kunye nobuchule obuya kukunceda ngokwamanqanaba kunye nehlabathi lo mdlalo, oya usiba nzima kwaye unzima, unikwa iintshaba. Ngokucacileyo unokuyiphucula iarhente yakho kwaye unike iinqanawa zakho amandla kunye namandla okujongana nazo zonke iingxaki ezinokuvela kumlo ophakathi. Unazo neenqwelo moya, izinto zakudala kunye needrones eziza kukunceda kwimfazwe yasemajukujukwini.
Umthuthukisi: My.com BV
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Imidlalo ye-Android » Iimidlalo ezi-5 eziphambili ze-spaceship ze-Android
I-TuLotero ngoku iyafumaneka kuGoogle Play: thenga ilotto kwiselfowuni yakho